Ny famolavolana Lufthansa vaovao dia mandeha amin'ny fitsidihana
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Ny famolavolana Lufthansa vaovao dia mandeha amin'ny fitsidihana
Febroary 5, 2018
Fiaraha-mientana amin'ireo mpankafy sy mpankafy an'i Lufthansa: amin'ny Alakamisy 8 Febroary, Lufthansa Boeing 747-8 tena manokana sy Airbus A321 no hitety an'i Alemana sy Eropa. Ny jet jumbo sy ny A321 no fiaramanidina Lufthansa voalohany amin'ny fifanarahana vaovao - ary hiseho amin'ny seranam-piaramanidina alemanina folo ary koa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Milan / Malpensa sy Paris / Charles de Gaulle.
100 taona lasa izay, mpamorona sary sy mpanao mari-trano Otto Firle no namolavola ilay biby heraldista an'ny Lufthansa: ilay crane. Ny vorona namboarina dia marika tsy azo lavina amin'ny fahaizana, saina malalaka ary kalitao. Nandritra ny taonjato lasa izay, ny logo Lufthansa dia nanjary iray amin'ireo mari-pamantarana malaza indrindra eran'izao tontolo izao ary androany dia izy no misolo ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka 5-kintana Eoropeana voalohany sy tokana. Amin'ny fankalazana ity tsingerintaona ity, Lufthansa dia tsy hoe miherika fotsiny, fa indrindra amin'ny ho avy - rehefa dinihina tokoa, ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay biby heraldika no fotoana mety indrindra hampivelarana ny maha-izy azy.
Ny Boeing 747-8 (fisoratana anarana: D-ABYA) dia hiainga avy any Frankfurt miaraka amin'ny laharan'ny sidina LH9988 amin'ny 8 ora sy sasany maraina ary hijanona ao Cologne, Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Hannover, Berlin, Dresden, Munich ary Stuttgart alohan'ny hahazoany miverina any Frankfurt manodidina ny amin'ny 30 hariva Ireo fiara-manidina dia tsy miandany amin'ny karbaona, miaraka amin'ny onitra ny famoahana CO5 amin'ny alàlan'ny myclimate.
Ny Airbus A321 (fisoratana anarana: D-AISP) miaraka amina endrika vaovao koa dia hanao ny diany mandehandeha ao anatin'ny serivisy nomaniny mahazatra amin'ny alakamisy: avy any Munich ka hatrany Milan / Malpensa ary miverina, mitohy hatrany Paris / Charles de Gaulle. Aorian'ny fiverenany any Munich avy any Paris, dia haka ny mpandeha farany avy any Munich mankany Frankfurt ary hamarana ny fitsidihany ny andro any.